प्रधानमन्त्री इमरानलाई पूर्वपत्नीको आरोप- ऊ 'प्ले ब्वाई' हो
प्रधानमन्त्री इमरानलाई पूर्वपत्नीको आरोप- ऊ ‘प्ले ब्वाई’ हो
काठमाडौं, १३ असोज । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रखर राजनेताजस्तो बन्दै गइरहेको छ । देशभित्र उनी मितव्ययी र भ्रष्टाचारविरोधी स्वच्छ प्रधानमन्त्रीको छवी बनाउन सफल छन् । देशबाहिर उनमा केही भाषण विशेष चर्चित छन् । जब भारतीय संसदले संविधानको धारा ३७० संशोधन गरी काश्मिरको स्वायत्तता खारेज गर्‍यो, तत्काल उनले पाकिस्तानी संसदमा काश्मीरबारे जोडदार भाषण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘हिटलर’ र बिजेपीलाई ‘हिन्दू नाजीवादी दल’ का रुपमा चित्रण गरे ।
पाकिस्तानलाई विश्वकप क्रिकेट जिताएको कप्तानी छवीसहित राजनीतिमा आएका खानले पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ (पिटिआई) गठन गरी २२ बर्षमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाए । साथै, देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणासभामा उनले ‘दुई आणविक राष्ट्र बीचको द्वन्द्वलाई हल्का रुपमा नलिन’ विश्व समुदायलाई चेतावनी दिएका छन् । यी इमरान खानको व्यक्तित्वका उज्याला पक्ष हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री इमारान खानकी पूर्वपत्नी रेहम खान भने इमरानको व्यक्तित्वलाई नक्कली, देखावटी र पाखण्डी ठान्दछिन् । रेहम खान पाकिस्तनी मूलकी बेलायती नागरिक हुन् । सन् २०१५ मा उनल इमारान खानसँग बिहे गरेकी थिइन । यो इमरानको दोस्रो विवाह थियो । तर यो विवाह लामो टिकेन । १० महिना मात्र रह्यो । इमरानसँग डिभार्सपछि रेगम बेलायत बस्छिन् । बौद्धिक क्षमताकी धनी रेहम टिभी एंकर, स्तम्भकार तथा लेखिका हुन् ।
इमरानको पहिलो विवाह बेलायती नागरिक जेमिमा गोल्डस्मिथसँग भएको थियो । जेमिमाबाट इमरानका २ छोराहरु छन् । रहेमसँगको दोस्रो विवाह पनि टुटेपछि उनले बुस्रा बिबीसँग तेस्रो विवाह गरे । रहेमको अरोप छ कि खान प्ले ब्वाई हुन् । उनका दर्जनौं लभ अफेयर र सेक्स स्क्याण्डलहरु छन् ।
सन् २०१८ को पाकिस्तानी आम निर्वाचन अघि आफ्नो नाम नै किताबको नाम बनाएर ‘रेहम खान’ आत्मकथा प्रकाशित गरिन् रेहमले । यो आत्मकथामा उनले इमरानसँगको १० महिने वैवाहिक जीवनबारे गहिराईमा लेखेकी छन् । आत्मकथाले इमरानको राजनीतिक भविष्य प्रभावित गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यस्तो भएन । इमरानको पार्टी पिटिआइ त्यो निर्वाचनमा पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो बन्न पुग्यो । इमरान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भई छाडे ।
किताबमा रेहमले इमरानबारे रोचक तथ्यहरु उजागर गरेकी छन् ।
रेगमको आरोप छ– इमरान सित्तै पाए अलकत्रा खाने स्वभावका थिए । खाद्यान्न, तरकारी तथा घरेलु प्रयोगका सामानमा कन्चो खर्च गर्दैनथे । आफ्ना फेन वा प्रभावमा पार्न सक्ने व्यक्तिहरुबाट उपहार लिन मज्जा मान्थे । उनी शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरुको नजिक रहन मन पराउँथे । राजनीतिज्ञहरुको शक्तिको दुरुपयोग गर्दथे । जहाँगिर तरिन र तारिक फजल चौधरीले सित्तैमा उनका लागि धेरै चिज आपूर्ति गर्दिन्थे ।
पर्दा र कार्पेटका लागि इमरानले पैसा नदिँदा रेहमले आफ्नै पैसा खर्चिन पर्थ्यो । इमरानले काठ ठेकेदारलाई धम्क्याएर सित्तैमा घरको झ्याल, ढोकाका लागि काठ प्राप्त गर्न रेहमलाई सल्लाह दिएका थिए । उनीमाथि पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको, नातावाद, कृपावाद चलाएको, अधिनायकवादी शैली अपनाएको आरोप बारम्बार लाग्थ्यो ।
पुस्तकमा रेहमको प्रश्न छ- यस्तो लोभी, अपारदर्शी र अरुको सित्तैमा खान पाउदा गौरवको अनुभूति गर्ने मान्छेले देशलाई के सुशासन देला ?
लागू औषध दूर्व्यसनी
रेहमले इमरानलाई लागू औषधी दूर्व्यसनी भनेकी छन् । उनले इमरानलाई बाथरुममा कोकिन सुङ्दै गरेको अवस्थामा बारम्बार भेटेको लेखेकी छन् । इमरान हिरोइनको उत्तिकै आदती भएको रेहमको दाबी छ । रेहमले लेखे अनुसार त्यो बेला उनले मानसिक तनाव कम गर्ने विभिन्न औषधीहरु खाने गर्दथे । इमरान अधिकांश आफुले भनेका वचन बिर्सन्थे । सम्झाउँदा झडङ्ग रिसाउँथे ।
इमरानको एकसाथ अनेक केटीहरुसँग चक्कर चलिरहेको हुन्थ्यो । उनी प्रेम र यौन सम्बन्धबारे कुनै नैतिक भावना कहिल्यै अनुभूत गर्दैनथे । उनको बेडरुमको छेउमा सधै सिगारको बट्टा र केवाइ जेलीको ट्युब हुन्थ्यो । पिटिआईका कयौं महिला नेतृहरु इमरानको यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुन्थे । तीमध्ये धेरैले सार्वजनिकरुपमा मुख खोल्दैनथे तर एकआपसमा गुनासो गर्थे । कतिपय पार्टी कार्यकर्तालाई उनले यौन दुर्व्यवहारको पोल खोलेबापत् पार्टीबाट कार्वाही गरेको रेहमको दाबी छ । रेहमले उज्मा करर्दानी र अल्दालिभ अब्बासको नाम नै उल्लेख गरेकी छन् ।
रेहमले इमरानका ५ बढी अवैध सन्तान रहेको उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्ता सन्तान भारतीय महिलाबाट भएका र राष्ट्रियताको समस्याले उनीहरु पिता दाबी गर्न नआएको लेखेकी छन् । तेरिन नामकी एक महिला र उनीबाट जन्मिएकी छोरी सीताको उनले नाम नै उल्लेख गरेकी छन् ।
इमरान र जेमिमाको बिहे ९ बर्ष टिकेको थियो । जेमिमाबाट सुलेमान र कासिम जन्मिए । इमरानमा जेमिमासंग बिहे गरेबापत् पश्चातापको भावना थियो । इमरान जेमिमासँग शारीरिक दुर्व्यवहारसम्म गर्थे । उनले एकपटक जेमिमाको हात भाँचिदिएका थिए । उमेर नपुगेकी एक किशोरीसंग यौनव्यवहारपछि इमरानले गर्भपतन गर्न लगाएको समेत रेहमको दाबी छ । रेहमले इमरान डान्सबार र नाइट क्लबमा समलिङी सम्बन्धमा समेत लहसिने गरेको रेहमको आरोप छ ।
रेहमले इमरानले प्रयोजित प्रचारमा खुबै ध्यान दिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । इमरानले पाकिस्तानका कर्पोरेट मिडिया हाउससँग नजिकको सम्बन्ध बनाउँथे । त्यसमार्फत् प्रायोजित इमेज बिल्डिङ गर्ने गर्थे । उनलाई फासिष्ट प्रोपागण्डा नीतिप्रति ठूलो विश्वास थियो ।
इमरान, जोहन्सन र ट्रम्पको तुलना
बोरिस जोहन्सन बेलायतको प्रधानमन्त्री भएपछि रेहमले इमरान, जोन्सन र ट्रम्पको तुलना गर्दै लेख लेखेकी छन् । त्यसमा उनी भन्छिन्, ‘केही हप्ता अघि केही पुराना साथीहरुले मलाई इमारान खान र बोरिस जोहन्सन बीचको समानताबारे एक लेख लेख्न सुझाएका थिए । मैले हाँस्दै इमरान जोन्सनभन्दा बढी ट्रम्पजस्तो छ भनेकी थिए ।’
तर जब मैले जोन्सनबारे पढे, ट्रम्पभन्दा बढी इमरानका समानता त जोहन्सनसंग पो रहेछन् । जोहन्सनले ५ भन्दा बढी महिलासंग गैरवैवाहिक सम्बन्ध राखेका छन् । कम्तीमा २ नोकर्नीहरुलाई पेट बोकाएर छोडेका रहेछन् । विदेश सचिवका रुपमा बोरिसको कुटनीतिक असफलताबारे मलाई थाहा थियो । तर उनको व्यक्तिगत जीवनबारे न चासो थियो न जानकारी ।
इमरान, जोहन्सन र ट्रम्प– तीनैजना आप्रवासीका सन्तान हुन् । फरक जातीय तथा सांस्कृतिक समुदायका महिलासंग विवाह गरेका छन् तर राजनीतिज्ञका रुपमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति सबैभन्दा असहिष्णु छन् । नश्लवादी छन् ।
जोहन्सकनको जिजुबाजे तुर्क मुस्लिम थिए । उनीकी आमा यहुदी थिइन् । जोन्हसनको आफ्नै राष्ट्रियता द्वैध चरित्रको छ । तर उनले ब्रेक्जिटमा जुन भूमिका गरे त्यो आप्रवासी र शरणार्थीप्रतिको घृणमा आधारित थियो । कमैलाई यो थाहा होला कि जोहन्सनकी दोस्री पत्नी पाकिस्तानी शहर सर्गोदाबाट आएकी शिख हुन् । जोहन्सनका ४ सन्तान उनीबाट जन्मेका छन् ।
इमारानको परिवार भारत–पाक विभाजनपछि भारतबाट पाकिस्तान आएको आप्रवासी थियो ।
ट्रम्पका हजुरबा हजुरआमा जर्मन आप्रवासी थिए । उनकी आमा घरेलु कामदारको रुपमा अमेरिका आएकी स्कटिस थिइन् । उनीकी पहिली पत्नी इभाना चेक थिइन् । ट्रम्पकी अहिलेकी पत्नी मेलानिया स्लोभेनियन हुन् ।
यी तीनजना मान्छेको सेलिब्रेटी हैसियत उनीहरुको भद्दा नादानी, अहंकार, आत्मकेन्द्रित सोच र यौनजनित ग्लेमर व्यक्तित्वबाट बनेको हो ।
अन्त्यमा रेहम प्रश्न गर्छिन्– अहिलेको दुनियाँ किन यस्तै चरित्रहीन र लम्पट मान्छेहरुको सतही व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुन्छ ? बुझ्न सकेकी छैन मैले ।
कांग्रेसलाई बैठकको भर, कम्युनिष्टलाई बैठकको डर
वैश्विक तापमानको असरः हरियो हुँदैछन् अन्टारटिका प्रायद्विपको सेताम्मे हिउँ
न्यूजिल्याण्डको बहस अमेरिका पुग्यो, सातामा चार दिन काम गर्ने चर्चा सुरु
देश, प्रदेश २, फिचर पोस्ट
कोही भोकै बसिरहेछन्, कोही भोकै मरिरहेका छन्
जनता घर फर्कँदा देश सोत्तर हुन्छ कि शासकीय असक्षमताले ?
देश, फिचर पोस्ट, वागमती प्रदेश
धादिङका कोरोना संक्रमित युवा भन्छन्- कोरोनालाई जितेर फर्कनेछु
कालापानी सीमा विवादः अब के गर्ने ? यथास्थिति, वार्ता कि युद्ध ?
माइक्रोसफ्टका सीईओको निष्कर्ष- वर्क फ्रम होमले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ
को हुन् लेबर पार्टीको नयाँ नेतामा चुनिए केर स्टार्मर ?
आर्थिक प्याकेज कहाँबाट दिने ? पैसा छापेर बाँड्ने ?
जहाँ मदनले फर्की आउँछु भनी दुर्घटनाअघि लुँगी र ब्रिफकेश छाडेका थिए
दासढुंगा काण्डको भावनात्मक दोहन कहिलेसम्म ?
अफगान हमलामा अनाथ भएका बच्चाहरुलाई दूध खुवाउने एउटी आमाको कथा
यसरी प्रस्तुत गरिँदैछ भारतीय सञ्चार माध्यममा लिपुलेक विवाद
पार्टी र व्यवस्था र अदालतभन्दा माथि केपी ओली
भारतमा लकडाउन रणनीति विफल, मोदी सरकारले अब के गर्ला ?